Sina HDPE dia nanamboatra orinasa mpanamboatra fantsom-panafody somary mangina | Shengyang
Mitsitsia akora tsotra sy fatiantoka ambany
Ny fantsom-pifandraisana HDPE sy ny fittings ho an'ny fifandraisana mafana miempo mafana dia fifandraisana indray mandeha, ary ny fittings dia tsy azo ampiasaina indray. Azo esorina ny fomba fampifandraisana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny famolavolana; mandritra ny fizotry ny fametrahana azy, ny fantsona HDPE dia mifamatotra amin'ny vava fisaka, tsy misy faritra mifanindry. Raha ampitahaina amin'ny fomba fifandraisana hafa dia afaka mampihena ny fatran'ny fantsona ny fifandraisana amin'ny peratra fanerena alika tokana.
Fifandraisana mifehy tsy manam-paharoa, fametrahana haingana
Tsy ilaina ny mitsonika mafana mandritra ny fanamboarana, tsy voafetran'ny tontolon'ny fametrahana, ny toetrandro, ny mari-pana sns. Raha ny fitsapana tena izy, raha ampitahaina amin'ny fantsom-by, dia mitovy ny injeniera apetraka, ary ny fotoana fananganana ilaina dia farafaharatsiny ahena mihoatra ny antsasany. Ny fantsom-pifaneraserana PVC-U dia tsy azo apetraka amin'ny maripana ambany na amin'ny toetr'andro orana, io fametrahana io dia azo atao amin'ny fomba mitovy.
Famolavolana rafitra ara-tsiantifika sy ara-dalàna, peratra famehezana karazana C tsy manam-paharoa hahatratrarana tombo-kase telo, hiantohana ny fahatokisana ny tombo-kase mampifandray, ary afaka manonitra tsara ny fiparitahan'ny fantsona amin'ny axis.
Fandidiana tsotra sy ara-toekarena
Fametrahana haingana, azo esorina ary tsy misy fikojakojana. Mitahiry herinaratra tsy misy teknolojia manokana. Sorohy ny lesoka izay mitaky olona sy asa maro ny fomba fampifandraisana. Haingana sy mora ny fametrahana, izay mampihena be ny vidin'ny fametrahana. Satria ny teboka fampifandraisana tsirairay dia samy teboka lehibe sy seranan-tsambo fikojakojana, azo ravana izany, ary ny rafitry ny fantsona dia afaka manova fanovana maro azo ampifanarahana amin'ny ho avy nefa tsy manampy sarany fanampiny.
Ny fomba fampifandraisana mifikitra amin'ny alikaola dia afaka manakana ny fifindran'ny tabataba tsy tapaka, mampihena ny hovitrovitra, mandray feo ary manatsara ny kalitaon'ny tontolo iainana. Raha ny fitsapana nataon'ny orinasa dia ny tabataban'ny rano ambanin'ny 49 desibre raha misy mponina misy rihana avo be dia be no mandro amin'ny trano fidiovana.
Sodina fantsona fantsom-panafahana Hdpe rehetra
Sodina HDpe Drainage mainty
Drainage Pe Sodina mitafo
Pipe-drano rano maloto